Gabadh soomaali ah oo maydkeedii laga helay Kanaal ku yaala magaalada London. .
London, 15 April 2004 -Inan Soomaali ah,oo magaceeda la yidhaahdo Nasra Cabdiraxmaan Ismaaciil, Da,deeduna ahayd 27 sano,ayaa maydkeeda waxaa laga helay kanaal ku yaala magaalada London.Gabadhaas ayaa waxay labadii bilood ee ugu danbeeyey ku noolayd Hoteelka magaciisa la yidhaahdo Dennis Handfield House hostel oo ku yaala xaafada King's Cross ee magaalada London.
Qaybo ka mid ah jirkeeda ayaa waxaa laga helay webiga arbacadii(14 apr),afar maalmood ka horna waxaa qaybo ka mid jirkeeda oo ku jira boorso laga helay kanaalka la yidhaahdo Regents Canal oo isna ku yaala isla magaalada London.
Booliiska ayaa waxay su,aalo waydiinayaan nin 53 jir ah oo ka yimid xaafada Dorset,ninkaas oo loo tuhunsan yahay in uu lug ku leeyahay dilka inantaas.
Booliiska yaa hada arinta gacanta ku haya,oo baadhaya sidii inantaas loo dilay,laakiin waxaa loo malaynayaa inay ugu yaraan laba maalmood mayd ahyd,ka hor intaan maydkeeda la helin.
Booliiska ayaa hada baadhitaan ku sameeyey xaafadaha ay ka midka yihiin Highbury iyo Holloway talaadadii ,iyagoo tuhunsan in dilku xaafadahaas ka dhacay.
Dhalinyaro da,doodu yare tahay ayaa markii ugu horaysay helay shandad ay ku jiraan qaybo ka mid jirka gabadhaas la dilay kanaalka ku yaala xaafada Islington,caruurtaas ayaa hada booliisku u fidinayaa caawimo,iyagoo ka shoogasan wixii ay arkeen.
Baadhitaanka dilka inantaas ayaa wuxuu hada ka socdaa maxakamada St Pancras Coroners Court ee magaalada London.
Wararkii ugu danbeeyey ee arinta dilka inantaas ku saabsan ayaa waxay sheegayaan in ninkii ay booliisku horay u qabteen,oo looga tuhunsanaa inuu ka danbeeyey dilka inantaas uu qirtay in isagu uu geystey dilkaas.
Wixii warar ah ee soo kordha insha allaah dib baan idinka soo sheegi doonaa.
Hadaan nahay bahda Laascaanood online waxaan tacsi u diraynaa qoyskii iyo eheladii ay ka geeriyootay marxuumadaas Nasra Cabdiraxmaan Ismaaciil,waxaana eebe ugu baryaynaa inuu janadii fardowsa ka waraabiyo,qoyskii iyo eheladii ay ka tagtayna samir iyo iimaan ka siiyo.AAMIIN!!AAMIIN!!AAMIIN.